Fepetran'ny serivisy - MP3.to
MP3 mankany WAV
MP3 mankany MP4
Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranokala amin'ny https://mp3.to , ianao dia manaiky ny hamatotra ireo fehezan-dalàna momba ny serivisy ireo, ny lalàna sy ny lalàna mifandraika rehetra ary manaiky ianao fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny lalàna misy eo an-toerana. Raha tsy mifanaraka amin'ny iray amin'ireo fepetra ireo ianao, dia voarara tsy hampiasa na hiditra amin'ity tranonkala ity. Ireo fitaovana ao amin'ity tranonkala ity dia arovan'ny lalàna mifehy sy miaro ny zon'ny mpamorona.
Nomena alalana ny misintona vonjimaika kopia iray amin'ireo fitaovana (fampahalalana na rindrambaiko) ao amin'ny tranonkalan'i Mp3.to ho an'ny fizahana manokana sy tsy ara-barotra ihany. Ity dia fanomezana fahazoan-dàlana, fa tsy famindrana titra, ary eo ambanin'ity lisansa ity dia mety tsy azonao:
mampiasa ny fitaovana ho an'ny tanjona ara-barotra, na ho an'ny fampirantiana ampahibemaso (ara-barotra na tsy ara-barotra);
manandrana manimba na mamadika injeniera misy rindrambaiko hita ao amin'ny tranonkalan'i Mp3.to;
Ity lisansa ity dia hitsahatra avy hatrany raha mandika ny iray amin'ireto famerana ireto ianao ary mety hatsahatry ny Mp3.to amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tapitra ny fijerinao ireo fitaovana ireo na rehefa tapitra io fahazoan-dàlana io dia tsy maintsy potehinao ireo fitaovana alaina ao aminao na amin'ny endrika elektronika na pirinty.
Ireo fitaovana ao amin'ny tranonkalan'i Mp3.to dia omena amin'ny fototra 'as is'. Mp3.to dia tsy manome antoka, voalaza na misy heviny, ary amin'izany dia mandà sy mandà ny fiantohana rehetra, anisan'izany ny, tsy misy fetra, ny fiantohana na ny fepetra momba ny varotra, ny fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, na ny tsy fanitsakitsahana ny fananana ara-tsaina na fanitsakitsahana ny zon'ny hafa.
Ankoatr'izay, ny Mp3.to dia tsy manome antoka na hanao fampisehoana momba ny maha-marina, ny valiny azo inoana, na ny fahatokisana ny fampiasana ireo fitaovana ao amin'ny tranokalany na raha tsy izany dia misy ifandraisany amin'ireo fitaovana ireo na amin'ireo tranonkala mifandraika amin'ity tranonkala ity.
Na inona na inona hitranga Mp3.to na ny mpamatsy azy dia tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana (ao anatin'izany, tsy misy fetra, fahasimbana noho ny fahaverezan'ny data na tombom-barotra, na noho ny fahatapahan'ny asa aman-draharaha) mipoitra avy amin'ny fampiasana na ny tsy fahaizana mampiasa ireo fitaovana ao amin'ny Mp3.to's tranokala, na dia Mp3.to na Mp3.to solontena nahazo alalana dia efa nampandrenesina am-bava na an-tsoratra ny mety hisian'izany fahasimbana izany. Satria ny faritra sasany dia tsy mamela ny fetra amin'ny fiantohana tsy azo antoka, na ny fetran'ny andraikitra noho ny fahasimbana vokatr'izany na sendra izany, dia mety tsy hihatra aminao ireo fetra ireo.
Ireo fitaovana hita ao amin'ny tranonkalan'i Mp3.to dia mety misy lesoka ara-teknika, ara-tsoratra, na sary. Mp3.to dia tsy manome toky fa misy fitaovana ao amin'ny tranokalany marina, feno na ankehitriny. Mp3.to dia afaka manova ireo fitaovana ao amin'ny tranokalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Na izany aza Mp3.to dia tsy manao fanoloran-tena hanavao ireo fitaovana.
Mp3.to dia tsy nandinika ny tranokala rehetra mifandraika amin'ny tranokalany ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atin'ny tranonkala mifandraika amin'izany. Ny fampidirana rohy rehetra dia tsy midika faneken'ny Mp3.to an'ilay tranonkala. Ny fampiasana tranokala mifandraika toy izany dia atahoran'ny mpampiasa azy manokana.
Mp3.to dia mety hanitsy ireo fepetra momba ny serivisy ireo amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ianao fa voafatotry ny kinova ankehitriny momba ny serivisy.
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia fehezin'ny sy adika mifanaraka amin'ny lalàn'i Connecticut ary ianao dia manolotra tsy misy fiovana amin'ny fahefan'ny fitsarana ao amin'io Fanjakana na toerana io.
Miova amin'ny MP3
MP3 mankany amin'ny Video
MP3 mankany WMV
MP3 mankany MPEG
MP3 mankany MPG
MP3 mankany DIVX
MP3 mankany MPEG-2
MP3 mankany FLV
MP3 mankany 3GP
MP3 mankany VOB
MP3 mankany AV1
MP3 mankany M4V
MP3 mankany HLS
MP3 mankany M3U8
MP3 mankany MKV
MP3 mankany M4A
MP3 mankany FLAC
MP3 mankany WMA
MP3 mankany AIFF
MP3 mankany AAC
MP3 mankany MP2
MP3 mankany M4R
MP3 mankany OGG
MP3 mankany AC3
MP3 mankany AMR
MP3 mankany DTS
MP3 mankany OPUS
Avadiho ho MP3
Lahatsary ho MP3
AVI mankany MP3
MPEG mankany MP3
MPG mankany MP3
DIVX mankany MP3
MPEG-2 mankany MP3
VOB mankany MP3
AV1 mankany MP3
M4V mankany MP3
MKV mankany MP3
WAV mankany MP3
M4A mankany MP3
FLAC mankany MP3
WMA mankany MP3
AIFF mankany MP3
AAC mankany MP3
MP2 mankany MP3
M4R mankany MP3
OGG mankany MP3
AC3 mankany MP3
AMR mankany MP3
DTS mankany MP3
MP3 mankany amin'ny ZIP
4,447 fiovam-po nanomboka ny taona 2020!
Vitan'i nadermx - © 2021 MP3.to